मुख्यमन्त्री राईको श्रीमती दावी गर्दै आएकी बालिका खड्का फेरी राईलाई भेट्न एमाले मुख्य कार्यालयमै पुगेपछि – Sapana Sanjal
मुख्यमन्त्री राईको श्रीमती दावी गर्दै आएकी बालिका खड्का फेरी राईलाई भेट्न एमाले मुख्य कार्यालयमै पुगेपछि
April 23, 2021 254
नेकपा एमालेका नेता तथा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विवाह गरेको केही महिना भएको छ । उनले निकै तामझामका साथ विवाह गरेका हुन् ।
तर आफूलाई प्रेममा धोका दिएको आरोप लगाउँदै आएकी बालिका खड्का फेरि मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई भेट्न पुगेकी छन् । राई पार्टी कार्यालय आएको थाहा पाएपछि उनी राईलाई भेट्न पार्टी कार्यालय पुगेकी थिइन्। उनी भित्रै प्रवेश गर्दै थिइन् उनलाई प्रहरीले रोकेको छ ।
विहिवार बिहान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय (थापाथली) पुगेका मुख्यमन्त्री राईलाई खड्काले भेट्ने प्रयास गरेकी हुन्। उनले आफुलाई राईको श्रीमती दावी गर्दै आएकी छन् ।
आफुलाई धोका दिएर राईले दोस्रो विवाह गरेको भन्दै अब अदालत जाने बताएकी उनले राईलाई ब्यक्तिगत रुपमा भेट्ने प्रयास गरेकी हुन् । राईले भने बालिकासंग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको बताउँदै आएका छन् । एमालेको मुख्यालय धुम्बाराहीबाट थापाथली सारिँदै छ।
एमाले पार्टी कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालको कक्षमा बसिरहेका मुख्यमन्त्री राईलाई भेट्न भन्दै बालिका भित्र पस्ने प्रयास गरे पछि प्रहरीले रोकेकी हुन् । उनलाई प्रहरीले बाहिर निकालेको छ। यसअघि पनि बालिका मुख्यमन्त्री राई भेट्न पार्टी कार्यालय पुगेकी थिइन् भने प्रहरीले त्यसैगरी रोकेको थियो।
Prevसाबधान ! के तपाईको पिसिआर रिपोर्ट सक्कली छ? नक्कली पिसिआर रिपोर्ट तयार पारेर दुई घण्टामै घर–होटलमा पु-याउने यस्तो गिरोहको खुलासा
Nextयो यस्तो अनौठो ठाउँ जहाँ ६–७ वर्षको उमेरमा सहवासका लागि तालिम दिईन्छ
राष्ट्रपति भण्डारीले लेखिन् अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनलाई पत्र
ढाडमा यो के भयो यस्तो ,मे रुदण्ड नै बा ङ्गो,प शु सरह यसरी हिड्छन् ,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो )